Ọgwụgwụ nke urua DANIEL ma ọ bụ ọgwụgwụ 2015 END 2016 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
On 13 September 2015 chọọchị ahụ adịghị wepụrụ na Jizọs Kraịst laghachiri Earth ma ọ bụ na 14 ma ọ bụ 15 September 2015!
Iji ghọta, ka na-analysis nke ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ kọwara na m gara aga blog posts.
N’ihi na anyị na Kraịst, nke ikpeazụ izu nke Daniel bụ oge nke afọ asaa na-agwụ na njedebe nke oge, mgbe nke Jizọs Kraịst ga-alaghachi Earth ịchị ụwa ruo otu puku afọ ruo mgbe doomsday.
N’oge ikpeazụ a oge nke afọ asaa ndi mmadu ga-adị ndụ mkpagbu.Mkpagbu ndị a ga-abụ nnọọ ike ugboro n’ihi na ha na-ahụ ntaramahụhụ na ụbọchị nke iwe nke Chineke.
Ndị a ntaramahụhụ ga-gradual n’ihi na nloghachi nke Jizọs Kraịst ga-abụ dị ka ihe mgbu nke na-amụ nwa na anyị maara na ihe mgbu na-na uche na-esiwanye doro anya ruo mgbe-amụ nwa.
Anyị na-aghọta na n’ikpeazụ ndị kasị sie ike oge nke ndụ oge nke « mmadụ » na ụwa ga-abụ ndị ikpeazụ ụbọchị eduga nloghachi nke Jizọs Kraịst.
Na m gara aga isiokwu m kọwara na ọgwụgwụ ụfọdụ malitere May 14, 1948 na oge nke ihe e kere eke nke ala nke Israel n’ihi na ihe niile mgbu malitere na na ụbọchị. History bụ n’ebe na-echetara anyị na-egosi ya.
Otu lee anya na n’oge gara aga n’aka-enye anyị ohere mata a na-akawanye njọ nke nsogbu nke ndi mmadu si na ụbọchị. Nsogbu ndị a, m kwuru na m na onye blog posts.
Rịba ama na ndị ikpeazụ Biblical izu e buru n’amụma site onye amụma Daniel ụfọdụ 600 afọ tupu mbụ na-abịa nke Jizọs Kraịst na dị ka anyị na-ama hụrụ ya dị ka ihe okwu nke afọ asaa ga-mezue njedebe nke oge.
M eche na malitere September 29, 2008 na ngwaahịa ahịa okuku on Wall Street.
O doro anya na ebe ọ bụ na ụbọchị nke 29 September 2008 na amụma na Akwụkwọ Nsọ ịdọ aka ná ntị ịrịba ama nke laghachiri n’ụwa nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst-emezu na otutu ike, magnitudes, osisi ike na oké ugboro.
Anyị na-ahụ site na ndị a ihe ịrịba ama na global mbibi ka nwayọọ nwayọọ na-aka njọ ebe ọ bụ na ụbọchị nke 29 September 2008 ebe ọ na kere site New York Stock Exchange price ida na ama -777.77 na kpọmkwem oge nke nsu. m òkù ka ị na-agụ akwụkwọ nke Pierre Jovanovic 777.
Na a mfe lee anya na n’oge gara aga anyị na-ahụ dị ka site na ụbọchị nke September 29, 2008 ọdachi na ọdachi nke ihu igwe na-aka njọ otú pụrụ iche n’akụkụ ọ bụla nke ụwa.
N’otu aka ahụ anyị na-apụghị ileghara anya na-eji nwayọọ nwayọọ kemgbe ahụ ụwa na-ata ahụhụ na ọnwụ nke Christian ụkpụrụ, na anya na extremism, na mmalite nke a ezigbo agha na busoro site Islamists megide Christian iche iche.
Taa mbubreyo 2015, doro anya, o doro anya na ebe ọ bụ na September 29, 2008, afọ asaa kemgbe ahụ, ndi mmadu bi oge siri oké ike.Insecurity, ịda ogbenye, ime ihe ike na agha bụ kwa ụbọchị ọtụtụ ndị mmadụ.
Humanity ndụ nnọọ ike ugboro gụnyere USA na Europe.
Anyị nwekwara ike na a lee anya na n’oge gara aga, na-ahụ na ebe ọ bụ na 2012, e nwere ezigbo amplification niile ọdụdọ, ọdachi, ọdachi, ime ihe ike na esemokwu na aghọwo a agha ụwa na achị.
N’ezie, ebe ọ bụ na March 2012 ụwa bụ na-alụ agha. Ọ bụ site na East na karịsịa na Syria na ụsụụ ndị agha nke ọtụtụ mba nke ụwa na-alụ ọgụ.
Echiche nile eziokwu ndị a nwere ihe ịrịba ama na mmezu nke amụma Bible, m zụlitere ekwe omume nke a nloghachi nke Jizọs Kraịst maka 14 echiche September 15, 2015.
O doro anya na nke ikpeazụ izu nke Daniel ka malitere 29 September 2008 na e ọma dechara site September 29, 2015 …!
Ma anyị nile hụrụ ọgwụgwụ nke September 2015 na megidere m analysis, Jizọs Kraịst nọ na alaghachikuteghm na ya ụka ama e wepụrụ …!
Na ndakpọ olileanya n’etiti ndị niile blog-agụ akwụkwọ, m maara na m na-aghọta ọbụna mma na m na-agwa na ndakpọ olileanya!
N’ezie dị ka ị maraworị na abụghị m onye amụma na mgbe na-ekwu na-adị.
O sina dị, ọbụna na-enweghị ndidi prọfet, m nwere ike ikwu na ike, mkpebi siri ike na nkwenye siri ike na nloghachi nke Jizọs Kraịst bụ nnọọ nso.
Nkwupụta a bụ n’ihi na arụmọrụ na ike, obosara, osisi ike na ugboro ole niile Akwụkwọ Nsọ amụma na ihe ịrịba ama niile nke nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Ha na-emezu na-enweghị obi abụọ ọ bụla, na ike, ọnụ ọgụgụ na ukwuu ugboro ole ebe September 29, 2008.
Mgbe ahụ, dị ka ọ bụla n’ime unu, m jụrụ onwe m otú ọ bụ na Jizọs Kraịst bụ ma azụ Earth, n’agbanyeghị nweta nke ihe ịrịba ama niile na amụma, gụnyere agha na East na n’ihe nile likelihood bụ na agha Amagedọn ga-Jizọs Kraịst na nloghachi ya.
Bụ m n’ezie na-ezighị ezi? O doro anya na ọ dịkarịa ala o doro anya na ee! Nke a ga-abụ nkịtị ebe ọ bụ nanị Chineke maara ụbọchị na awa nke nloghachi nke Jizọs Kraịst!
Nsogbu anyị na-enwe ma ọ bụrụ na m bụ n’ezie-ezighị ezi, bụ na ihe nile ọdachi ndị na-anyị bi n’ụwa na niile ubi, bụ ihe ọ bụla ọzọ na ndị na-echere anyị dị ka anyị maara na ọdachi na ihe mgbu ga-aka njọ ugboro ugboro n’akwụsịghị akwụsị ruo mgbe nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst!
Na mgbe ahụ anyị na-aghọta na anyị nwere n’ezie na oké nsogbu n’ihu anyị.
Dị ka m ugbua kọwara na m gara aga isiokwu, nloghachi nke Jizọs Kraịst nwere ike ime kwa ụbọchị ebe mbụ ịrịba ama na ama ebe May 14, 1948 n’ihi na Chineke nwere ike na-ebelata ahụhụ na ihe mgbu.
The n’obi imecha ya maka njedebe nke oge bụ karịa ndụ nke ọgbọ mụrụ na 1948 (May 14, 1948 eke, dị ka anyị hụworo, ndị ụbọchị nke mbụ ịrịba ama nke ọgwụgwụ ugboro).
Nke a na-eweta anyị 2068 dị ka kacha ndụ nke mmadụ bụ afọ 120 na Bible.
Ma, e nyere ike, ike, size na ugboro ole nke ihe ịrịba ama akpọsa rụzuru na amụma nke nloghachi nke Jizọs Kraịst, anyị ga-aghọta na nke a nloghachi dị nso.
Ma mgbe ahụ, ma ọ bụrụ na m ehiewo ụzọ, ihe mere oge …!
Mgbe ụka ma nyochara nke ọnọdụ, m nwere ike ịbụ na nkọwa.
My reflections na analysis nwekwara ike inye aka na-enye nkọwa na ozi ọma nke ịtọrọ maka September 13, 2015, mere ka anyị na Nwanna Claude IGNERSKI.
Anyị Nwanna Claude meworo a dị ịrịba ama ọrụ na-akọwa atọ ọrụ ukwuu na njedebe nke oge. M na-agba unu niile na-agụ.
Ọ tara ahụhụ na-ezighị ezi n’ezie lynching site Ụmụnne-ebo ya ebubo nke ịbụ onye amụma ụgha.
Ma m na-eche na ọ ka nọ akụkụ n’ihi n’agbanyeghị-apụghị ịgbagha agbagha eziokwu na chọọchị adịghị wepụrụ September 13, 2015 ka o zubere.
Ka echiche m ịghọta,
Aku nsogbu nke malitere September 29, 2008 yiri ka o doro anya na mmalite mkpagbu, nyere ngwaahịa ahịa okuku nke Wall Street na mmezu nke ihe ịrịba ama na amụma nke ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ ndị sochirinụ.
Anyị maara mkpagbu ndị a bụ maka a okwu nke afọ asaa na na-kewara abụọ n’akụkụ nke atọ na ọkara ọ bụla.
Ajụjụ mbụ m jụrụ onwe m:
N’ihi gịnị ka Bible na-ekwu ugboro abụọ atọ na ọkara?
Banyere ọzọ na akụkụ nke abụọ ga-abụ ihe siri ike karịa nke mbụ.
Ọ bụ mfe ikwu na ihe mgbu ga-enwe afọ asaa nke na-aga n’ihu …!
Dị ka ihe ọ bụla e dere n’ihi na ihe ọ bụla na Bible, nke a nkenke sọrọ atọ na ọkara afọ otú e nwere a mere a ga-otú kwuru.
Atọ na ọkara afọ mgbe September 29, 2008-ewetara anyị 29 March 2012 na akụkụ nke abụọ nke atọ na ọkara obi ụtọ agwụcha September 29, 2015.
Ụbọchị nke September 29, 2015 pụrụ ịbụ nnọọ n’obi imecha ịbụ akụkụ nke chọọchị nke Jizọs Kraịst ga-ewepụ.
Ma ndị na-na a hoputara ịnọgide n’ụwa ruo ụbọchị nke mgbatị ndị mmụọ ozi nke Jizọs Kraịst.
Cheta na Bible na-ekwu na Daniel 12 amaokwu 11:
« Site na oge na ụbọchị àjà ga-akwụsị mgbe abomination nke tọgbọrọ n’efu ga-arụnyere, 1.290 ụbọchị ga rue ».
The 1290 ụbọchị ndị atọ na ọkara afọ ma ọ bụ 42 ọnwa nke abụọ akụkụ mkpagbu « oké mkpagbu ahụ »
N’amaokwu 12 anyị na-agụ:
« Ngọzi na-ọ bụ onye na-echere na ịga nke ọma na 1335 ụbọchị! «
M kwere na Jizọs Kraịst nwere n’afọ ofufo hapụrụ hoputara ndị chọọchị ya na-eche (dị ka amaokwu nke 12 nke isi nke 12 nke Daniel) on Earth ka a mere na 1335 ụbọchị.
Nke a bu eziokwu, ma ọ bụrụ m ehiewo ụzọ, ọnwa abụọ na ụbọchị 21 ọzọ-atụkwasịkwara 29 September 2015. Nke a na-eweta anyị December 20, 2015 maka nloghachi nke Jizọs Kraịst anyị na-eche September 2015.
Anụ ahụ nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ga-kpọkwasịwo mwepụ nke ụfọdụ nke chọọchị ya.
My abụọ echiche:
Dị ka m kwuru a obere tupu ke ederede, ọ dịghị ihe e dere na Baịbụl ka ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na afọ asaa ikpeazụ na-ekewa n’ime ugboro abụọ atọ na ọkara mgbe ahụ anyị ga-aghọta na pụrụ ịdị a nwụrụ anwụ oge n’etiti abụọ oge nke atọ na ọkara.
Nke ikpe akụkụ mbụ nke atọ na ọkara afọ dị ka atụmatụ agwụcha March 29, 2012 ma nke abụọ egwuregwu amalite a obere ka e mesịrị.
Nke ikpe multiple ụbọchị nwere ike họrọ maka mmalite nke oké mkpagbu ahụ.
N’amaokwu nke 11 nke isi 12 nke Daniel
1) The ụbọchị nke arụkwaghịm nke Pope Benedict XVI: The February 28, 2013
2) The ụbọchị nke nhọpụta nke Pope Francis: The March 13, 2013
M jide a atọ, sị:
Otu ebe Pope François edu n’elu Way nke Cross: The Friday March 29,2013.
Nke ikpe na nloghachi nke Jizọs Kraịst nwere ike na-ebe ke nkera nke abụọ nke 2016 na ma eleghị anya na oge nke ememe nke Rosh Hashanah na 03 na October 4, 2016.
Nloghachi nke Jizọs Kraịst ga-kpọkwasịwo mwepụ nke ụfọdụ nke chọọchị ya.
Ọ bụrụ na nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst emee mbubreyo 2015 ma ọ bụ mbubreyo 2016, anyị nwere ike na-eme atụmatụ anyị nnọọ obi ụtọ n’ihi na ịdị ukwuu nke ikpe Chineke ga-erughị siri ike ma ọ bụrụ na nloghachi e-egbu oge n’ihu na oge.
N’ihi na dị ka ihe mgbu, na sorrows nke ndi mmadu ndị yiri dịghị, na-na-aka njọ na ọzọ ruo mgbe nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Ọ bụrụ na Jizọs Kraịst abụghị forthcoming, mgbe ahụ, o doro anya na anyị ga-ata ahụhụ ọtụtụ ndị ọzọ!
Ọ bụ ya mere nnọọ mkpa na-ekpe ekpere na-ekpe ekpere ugboro ugboro na-arịọ Chineke ka ebelata anyị ahụhụ na ihe mgbu ikwe a ozugbo laghachi ụwa nke Onyenwe anyị na Jizọs Kraịst, Eze ya na nwa.
Oge nke nnapụt’unu dị nso ma tupu ọchịchịrị ụbọchị n’ihu.
Naanị ekpere, okwukwe na ịhụnanya ga-enyere anyị site ikpeazụ ọchịchịrị.
Na-ọma udo bụ ire ọkụ nke okwukwe anyị.
Ekiri na-ekpe ekpere maka ngwa ngwa nloghachi nke Onyenwe anyị na Eze Jizọs Kraịst na maka Hi nke mkpụrụ obi anyị.
Peace, ịhụnanya na ọṅụ n’ime obibi na-atụ anya nke gọziri agọzi ụbọchị nke nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.